Kutengesa marobhoti ▼
Robhoti rekutengesa rakatsaurirwa kumusika wegoridhe (xauusd).
Robhoti yekutengesa yakatsaurirwa kumusika we cryptocurrency.
Robhoti yekutengesa yakatsaurirwa kumusika wemafuta.
Yekutengesa robhoti yakatsaurirwa kumusika weEngland.
Commodity-based kutengesa marobhoti.
Chengetedza mari muBig Data cryptocurrency.
Chengetedza mari mugoridhe nemadhaimani nemacrytos ako.
Invest in real estate neiyo Ethereum blockchain
Tenga, chengeta uye chengetedza zvinodarika mazana maviri nemakumi mashanu emadhora
🎥 Vhidhiyo dzidziso, kubva ku blockchain kuenda ku cryptocurrencies
Ruzivo rwakakosha nezve yega yega cryptocurrency
Batanidza kune atg-system.com
Batanidza kune acbot.io
Goridhe Kutengesa Robhoti
AutoTrade Gold 5.0 iri kutengesa robot Indonesia otomatiki zvichibva pamusika wegoridhe. Zvakare zita remadunhurirwa rekuti ATG, Goldoracle, Self Gold kana EA Robot Gold nevashandisi vayo, inovavarira kuwana zuva nezuva pakati pe0,5 ne1,5% yemari yako. Iwe haugone kurasikirwa kupfuura 3% pazuva. Iri robhoti rinotengesa mu scalping mode uye rinongovhura chinzvimbo chimwe panguva. Yakachengeteka zvakakwana, kana ATG 5 ikanyora kurasikirwa, ichaedza kugadzirisa iyo yakawana mukati mezuva nekutengesa kwechipiri. Ziva zvakare AutoTrade Crypto, robhoti idzva rekutengesa richiita 7/7 zuva rinowana paBitcoin.
Nyoresa pa AutoTrade Gold Updated tutorial
📀 EA ATG 5 iripo yekurodha zvachose broker.
Rezinesi 1 mutengo paAuto Trade Gold
Inokurudzirwa zvishoma mari yese
Inotarisirwa kuwana pamwedzi
Kubatsira kwerobhoti AutoTrade Gold
Tonga uye udzore mari yako pa broker LegoMarket LCC kushandisa app MetaTrader 4 ou with the broker yesarudzo yako nekutenga uye kurodha robhoti kubva pawebhusaiti yePansaka (nhanho 2 yedzidziso iri pazasi). Iwe chete ndiwe unokwanisa kuwana mari yako: Yekutanga homwe + mihoro inogadzirwa + mubereko wakasanganiswa.
Hapana software yekuisa. Hapana hunyanzvi hwekutengesa hunodiwa.
Mhinduro yekutengesa yakagadzirwa ne Pansaka, yakanangana nemusika wegoridhe.
Kubudirira ± 15%
Avhareji passive mari ye15% mukudzoka kwemwedzi.
Kupfuura makore 2 mumusika chaiwo mamiriro.
Tanga ruzivo nemari shoma yemadhora mazana matanhatu emadhora mazana matanhatu.
Mibairo yakajeka pachishandiso chako MetaTrader 4.
15% mihoro / mwedzi ne AutoTrade Gold
pamwe Auto Auto Gold 5.0
🚧 Chenjerera, hapasisina vhidhiyo inoshanda paYouTube chero bedzi kuchengetedza kwesaiti Pantheratrade richiri panzvimbo. Dzidzo yakanyorwa pazasi ichagara ichigadziridzwa.
Iva neakaunzi yeCrypto
Platform inokutendera kuti utenge uye utengese yako cryptocurrencies asiwo kudyisa robhoti rako uye broker Lego Market.
Nyoresa pa PantheraTrade
API chikuva chinobatanidza ATG kune broker Lego Market.
Tenga rezinesi rako paPansaka
Yekubatanidza chikuva inobvumira kutenga kwehupenyu hwako rezinesi.
Mufananidzo gallery Autotrade Gold pa Instagram
Kuverengerwa kweATG 5.0 purofiti pasina kusanganisira chikamu chemubereko
Tafura iri pazasi inofanira kutorwa semuenzaniso uye inogona kusaratidza izvo chaizvo zvazviri. Iyo inoratidza shanduko yemari yako zvinoenderana nemari yakaiswa, zvichibva pa kuwedzera kuwedzera kwe15% pamwedzi. Mbereko yekomboni yezuva nezuva haina kuverengerwa pakuverenga uku. Kana iwe ukabvisa mihoro yako mwedzi wega wega, zvinokutora ingangoita mwedzi mitanhatu kuti udzore mari yako yekutanga maringe nemwedzi mina kana ukasabvisa chero chinhu.
+ 300.000 vatengesi TGA zvawanikwa 5
Dhipatimendi: 500 €
+ rezinesi 2 ($ 224)
Dhipatimendi: 1500 €
Dhipatimendi: 5000 €
+ rezinesi 3 ($ 560)
Dhipatimendi: 10000 €
⚠️ Zviyeuchidzo zvakakosha uye zano kune chero investor
Rangarira kuti iyi imari ine njodzi, kuti urikudyara mari yausingade kuti urarame uye kuti chinangwa chako chikuru ndechekudzosa mari yako yekutanga nekukurumidza sezvinobvira maererano nehurongwa hwako.
Muenzaniso zano : Ndinoisa $ 10.000 pa AutoTrade Gold. Pasina kubvisa uye mumwedzi ye5, ndinofanira kupeta mari yangu. Pandakangosvika pamari ye $22.000, ndinotanga kubvisa $2000 pese apo robhoti rinozvigadzira mukati memavhiki mashoma. Saka ndinobvisa kubva pa$22.000 kusvika pa$20.000 pese pandinovasvika. Ini nokudaro ndinowana mari yangu yekutanga mukati memwedzi isingasviki 9 uye ndinoburitsa mari isingaite yemadhora zviuru zvitatu mwedzi wega wega (3000 x 20.000%) nekutenda Autotrade Gold.
5 marezinesi anowanikwa zvichienderana nekwanisi yako yekutengesa
Marezenisi anogona kuvandudzwa, kureva kuti unongobhadhara mutsauko uripo pakati perezinesi razvino nerezinesi raunoda. Robhoti haritengesi pasi pemari yemadhora zana. Kana iwe ukabvisa uye ukapfuura iyo $100 chikumbaridzo muakaundi yako yekutengesa, iwe unorasikirwa nerezinesi rako.
muenzaniso : Rezinesi 2 inogumira kumadhora mazana mashanu (yakaiswa capital + mari yezuva nezuva). Izvi zvinoreva kuti nerezinesi iri, kana wangoisa capital yako, semuenzaniso $5000 uye waita $3000 mumari, unenge wasvika pamvumo ye $2000. Kubva ipapo, robhoti yako icharega kutengesa. Naizvozvo unozofanirwa kudzoreredza chikamu chemari yako kana kutora rezinesi repamusoro. Rangarira kukwidziridza robhoti rako risati ramira, zvikasadaro uchafanirwa kubata tekinoroji tsigiro kana nemaoko kutangazve kubatana kwerobhoti kune saiti. ATG System. Bhatani rinopihwa nekuda kwechinangwa ichi.
kwemari yakazara pakati pe100 uye 500 $.
Tenga rezinesi 1
kwemari yakazara pakati pe100 uye 5.000 $.
Tenga rezinesi 2
kwemari yakazara pakati pe100 uye 30.000 $.
Tenga rezinesi 3
kwemari yakazara pakati pe100 uye 1.000.000 $.
Tenga rezinesi 4
kune mari shoma ye 1.000.000 $.
Tenga rezinesi 5
ATG 5 Tsigiro yehunyanzvi
Kazhinji mibvunzo pamusoro Autotrade Gold 5.0
Rumwe ruzivo rwekuwedzera nezve iyo yekutengesa Bot
Ndine mibvunzo pamusoro AutoTrade Gold, Pantheratrade, Pansaka kana ATG System
Kana uine chero mibvunzo maererano AutoTrade Gold 5.0, ndinokupa zano kuti uswedere pedyo nemubatsiri wako wakananga. Tsigiro yehunyanzvi kubva PantheraTrade inoumbwa nevashandi makumi manomwe. Kuti ubatane navo, unozofanirwa kuvhura tikiti uye wotsanangura chikumbiro chako chaizvo muChirungu uye batanidza chinonamirwa kuti unzwisise zviri nani. Bata navo chete kana paita dambudziko, kana zvisina kudaro fonera mubatsiri wako. Kune matambudziko ekupihwa rezenisi, bata Pansaka rutsigiro, kune matambudziko ekubatanidza kune yako robhoti, sarudza saiti ATG System.
Vhura tikiti rerutsigiro rwehunyanzvi RDV paTeregiramu kutevera nhau
Zvimwe zvinonetsa ne Autotrade Gold 5.0?
Technical rutsigiro kubva Panthera anotibvunza isu, semubatsiri, kuti akubatsire iwe nematambudziko aungasangana nawo asi zvakakosha kuti iwe uite chikumbiro pachako nekuvhura tikiti: https://panthera.support
Nhanho 1 / PantheraTrade
Matanho ekutevera kunyoresa parobhoti Autotrade Gold 5
Ndinokurudzira kushandisa a Yahoo kana Gmail kero paunonyoresa. Vamwe vanga vaine matambudziko ekusimbisa neemail neHotmail, Live, Wanadoo, Laposte kero...
Nyoresa pa AutoTrade Gold 5.0
Zadza ndima 5 anodiwa:
1 - Gadzira yako Username
2 - Nyora zita rako rekutanga uye zita rako rekupedzisira
3 - Sarudza nyika yako yekugara
4 - Isa nhamba yako yefoni
5 - Isa email yako (zvichida Gmail)
Gamuchira Mitemo yeSevhisi, wobva wasimbisa
📨 Autotrade ichangokutumira email password yako. Inogona kuchinjwa gare gare. Kana usati waigamuchira mukati me5 maminetsi, unogona kukumbira kukanganwa pasiwedhi kubva pane peji rekupinda.
✅ Kana iwe usina account ye cryptocurrency, ndinokuraira, izvozvi, kugadzira account pa Binance, Coinbase, Kraken... Dzivisa kuchinjana kunovhara kubvisa kwako kweanopfuura maawa maviri seCrypto.com, semuenzaniso. Unogona kutenga crypto pairi Binance nekadhi rako rechikwereti. Nekudaro, iwe unenge wakanamatira pamuganho wekubvisa wakaganhurirwa nebhangi rako. Kuita mari yekubhanga uye nekudaro kuisa mari hombe, unogona kushandisa SEPA sevhisi pa Binance.
Nyoresa pa Binance Tutorial Binance
Kana nhamba yako yefoni yakatonyoreswa, unogona kuidzosera uye kutsiva 06 ne336, kana uchigara kuFrance. Shandisa iyo callsign semukana wechipiri.
Chikamu 2 / Pansaka
Nyoresa pa Pansaka kuti uwane yako ATG 5 rezinesi
Pansaka ndiyo kambani inobata ese marezenisi eAutotrade ekutengesa zvigadzirwa. Usakanganwa kuti unofanira kuva nazvoUSDT kana Litecoin LTC pakuchinjana kwako kutenga rezinesi rako.
Refferal Nhamba: 10110618
Zita rekutanga + Zita rekupedzisira
Yakakwira-ku-zuva chitupa kadhi kana pasipoti nhamba
Pasiwedhi + simbiso
Zadza iyo Crypto Akaundi fomu:
- Sarudza USDT
Crypto Kero: Ratidza dhipoziti kero yako USDT
(Ethereum ERC 20 network) chete
Chikamu 3 / Pansaka
Maitiro ekutenga kana kukwidziridza rezinesi rako AutoGold 5.0?
Pane peji rekutanga rekambani yePansaka, tinya pane iyo tebhu Yakakosha Chirongwa> Tenga Ramangwana Package uye sarudza rezinesi zvinoenderana nehuwandu hwekutengesa hwaunoda kuisa.
💡 Ini ndinokupa zano kuti utange nerezinesi 1 uye dhipoziti yemadhora zana negumi kuitira kuti uongorore mashandiro erobhoti uye kugona kwayo kuburitsa mari yekungoita. Iwe unogona ipapo kukwidziridza marezinesi ako nekubhadhara chete mutsauko pakati peumwe neumwe wavo. Saka tanga nekutenga Litecoin (LTC) pa Binance nehuwandu hwe 250 € nekadhi rechikwereti.
Kuti ubhadhare rezinesi rako uye woisa mari yako ne broker, tinokurudzira kutenga nekubhadhara neLitecoin (LTC) kuti zvive nyore, kukurumidza uye mari shoma yekutengeserana.
Zvinotora awa kuti rezinesi rako rishande uchishandisa CoinPayment.
Chikamu 4 / Pansaka
Kutarisa uye kubhadhara rezinesi rako
Mumuenzaniso uyu, ndakasarudza rezinesi 2 yeATG robhoti pa broker Lego Market.
Bhatani 1: Dzvanya bhatani iri kuti usarudze kubhadhara mu cryptocurrency. Iyo popup ichavhura, tinya pane Crypto bhatani wobva wasimbisa.
Bhatani 2: Gadzirisa uye Kuwana invoicing
Chikamu 5 / Pansaka
Kubhadhara rezinesi rako
Pfupiso yemutengo uye mutengo mumadhora.
Wobva wadzvanya pane iyo Coinpayment bhatani.
Nhanho 6 / Coinpayment
Kubhadhara rezinesi rako Autotrade Gold in Litecoin (LTC), pamwe CoinPayment.
Zadza ruzivo rwako rwekubhadharisa kuruboshwe, kureva zita rako rekutanga, rekupedzisira uye email kero (tarisa kuti hapana kukanganisa mu email yako kero). Kurudyi, sarudza cryptocurrency Litecoin (LTC) yemutengo wayo wakaderera wekutengesa.
Chekupedzisira, tinya pane bhatani bhatani kuruboshwe, pasi peiyo email, kuti usimbise fomu. Hapana zvachose chikonzero chekunyoresa neCoinPayment kuti upedze kutengeserana.
Iyo itsva CoinPayment peji ichavhura uye kukuratidza iyo uwandu naizvozvowoLTC kero kwaunofanirwa kuendesa yako Litecoin (LTC) yatotengwa pane yako yekuchinjana (Binance, Coinbase, nezvimwewo).
pamusoro Binance, heino link ye tenga Litecoin kubva pakadhi rebhangi.
Nhanho 7 / Coinpayment
Kupedzisa kubhadhara kwemarezinesi ako Autotrade Gold.
Enda kune yako yekuchinjana se Binance, ita mari chaiyo yekubvisa paKero yeLTC yakumbirwa. Rangarira kuwedzera iyo 0,001 LTC pamari yakakumbirwa zvikasadaro kutengeserana kucharambwa uye iwe uchadzoserwa kuburikidza neCoinPaiement. Mari ichashandiswa neCoinpayment mukudzoka.
Pinda kero yeLTC yemubatsiri. Iyi ndiyo kero (tambo) inopfuudzwa kuCoinpayment.
Kuendesa kunofanirwa kuitwa uchishandisa network LTC.
Ratidza huwandu hweLTC nekuwedzera 0,001 pamutengo wekupedzisira
Wobva wasimbisa fomu.
Iwe uchagamuchira email yekusimbisa na Binance uye CoinPayment ichikuudza kuti kutamisa kwakabudirira. Kana wakanganisa, usavhunduka! Iwe uchagashira email kuti udzoserwe mari yacho mumaminitsi mashoma kuburikidza neCoinPaiment uchipesana nemari yetransaction. Tarisa spam yako. Unofanira kutaura yako LTC dhipoziti kero.
Nhanho 8 / Pantheratrade
Kuvhurwa kwe a MT4 account kutengesa pa Pantheratrade.
Kuti ushandise akasiyana marobhoti ekutengesa anopihwa nekambani PantheraTrade, unofanira kuvhura a yakajairwa MT4 account. Izvi zvichaisa pakati zvese zvigadzirwa zvinowaniswa kwauri.
Kuti uite izvi, tinya pane iyi link Regular Accounts> MT4 Account. Wobva wadzvanya bhatani Gadzira MT4 Account
Nhanho 9 / Pantheratrade
Chinja yako Password yenguva yakagamuchirwa neemail.
Iwe uchangobva kugamuchira zita rako rekushandisa uye password yechinguvana neemail. Zita rako rekushandisa ndiyo yako Login Login.
Isu tichachinja password yako yechinguvana.
Kuti uite izvi, tinya pane chinongedzo chiri pazasi kuruboshwe rwechidzitiro: Reset Login Password. Isa password yako yenguva pfupi yakagamuchirwa neemail mundima yekutanga, wobva waisa iyo nyowani yekuisa password mundima mbiri dziri pazasi.
Nhanho 10 / Pantheratrade
Gadzira account yako Autotrade Gold.
Kutanga, tinya pane chinongedzo CopyTrade Accounts> MT4 Account. Dzvanya bhatani rebhuruu kumusoro kurudyi: Gadzira Nhamba Yenyaya
sarudza AutoTradeGold muSarudza Category, wobva wadzvanya bhatani Gadzira MT4 Account.
Tafura inofanira kuonekwa pane peji itsva. Chengetedza yako MT4 Login Account uye yako MT4 Investor Password yakachengeteka. Ivo zvakare vachatumirwa kwauri neemail. Aya macode achakubvumidza kuti uteedzere kutengeserana pamwe neakaundi yako yezuva nezuva.
Nhanho 11 / Pantheratrade
ipa yako KYC kugadzirisa account yako.
Kuti usimbise account yako, unofanirwa kupa chimwe chezvikamu zvitatu zvekuzivikanwa zvakakumbirwa (chitupa chenyika, pasipoti kana rezinesi rekutyaira). Chenjerera, chitupa chako hachifanirwe kupera nguva kana KYC yako icharambwa otomatiki.
Sarudza rudzi rweID yaunoda wobva watora foto ne smartphone yako.
Isa nhamba yeID yako yaunoda mumunda: Isa Nhamba yeID.
Isa mufananidzo wako (kuwedzerwa kunoshanda: jpg, jpeg kana png). Usapfuure huremu hwe1 Mo. Kuti uwedzere mufananidzo wako usati watumira, shandisa saiti neworleansporn.com.
Pane peji Update KYC, unofanira kuona chimiro chako mu "Pending" mode. Ipa timu nguva Pantheratrade kuratidza chitupa chako.
Nhanho 12 / Pantheratrade
Bhadhara yako Voucher kuti usimbise kero yako yedhipoziti.
Iyo Profile Voucher kunyoreswa kwedhipoziti kero yako kuti ugamuchire kuhwina kwerobhoti. Kero iyi inogona kuva BTC, ETH kana USDT erc20 / trc20. Tinokurudzira iyoUSDT trc20 (trx) yemitengo yakaderera yekutengeserana uye kugadzikana.
Dzvanya pahutano Profile Vouchers ipapo bhatani Tenga Vocha Itsva
Sarudza crypto: ETH, BTC, USDT TRC20 kana USDT ERC20, wobva wasimbisa
Pazasi pe peji, tinya pane Manual Checkout bhatani, iwe unozoendeswa kune Coinpayments kuti ubhadhare.
Nhanho 13 / Pantheratrade
Mise à jour Update Profile.
Iyo Profile Voucher inobhadharwa uye yako Voucher kodhi inoonekwa patafura, koramu Voucher. KYC yako iri kubvumidzwa. Tichazopedzisa kuzadza iyo Profile.
Kutanga, isa kero yako USDT trc20 uye/kana erc20 wobva wasimbisa.
Iwe uchagamuchira OTP kodhi neemail. Iyi kodhi inofanira kuiswa mundima yekutanga.
Mundima yechipiri, isa Voucher kodhi yauchawana pane peji Profile Voucher, Voucher column. Wobva wasimbisa.
Nhanho 14 / PantheraTrade
Maitiro ekuisa mari yako yekutengesa pa PantheraTrade ? (1/3)
Zvinofungidzirwa kuti rezinesi riri munzira yekubhadharwa.
Tinodzokera kunzvimbo PantheraTrade kuitira kuisa mari yekutengesa pamwe ne broker Lego Market LCC.
Dzvanya COPYTRADE ACCOUNTS > MT4 Deposit
Wobva wadzvanya pane bhatani MT4 New Deposit
Kazhinji iyi ndiyo dhipoziti yako yekutanga pa PantheraTrade, asi kana ukazoshuvira kuwedzera capital yako, uchafanirwa kudzokera kudanho iri. Ramba uchifunga kuti iyo dhipoziti huwandu zvakare zvinoenderana nesarudzo yako rezinesi.
Mari yeUS $: ratidza huwandu hwaunoda kuisa mumadhora
Sarudza Akaunti: yako ATG account nhamba Gold
Tarisa bhokisi rakatsaurirwa kumatemu ekushandisa, wobva waendesa fomu iri
Stage ? / PantheraTrade
Deposit capital yako ne CoinPayment. (2/3)
Zadza ruzivo rwako rwekubhadhara, kureva zita rako rekutanga, zita rekupedzisira uye kero yeemail.
Sarudza Litecoin (LTC).
Pakupedzisira, tinya pane bhatani rebhuruu kuruboshwe.
Peji nyowani inovhura paCoinPayment ichikupa iyo mari pamwe nekero yaunofanirwa kuisa yako Litecoins LTC.
Ndokumbira utarise, ino ichave iri nyowani kero yekuisa. Haizove yakafanana dhipoziti kero serezinesi rako.
Deposit yako yekutengesa capital ne PantheraTrade. (3/3)
Kufanana kumwechete sekutenga rezinesi. With Binance, ita iyo mubhadharo chaiwo nekuwedzera 0.001 kune yakakumbirwa LTC huwandu: https://www.binance.com/fr/.../crypto/LTC.
Pinda kero yeiyo LTC yekugamuchira, iyo yakataurwa paCoinpayment.
Ratidza iyo LTC huwandu, wobva wawedzera 0,001 pamutengo wekupedzisira.
Wait️ Mira mashoma makumi emaminetsi. Iwe uchagamuchira email yekusimbisa na Binance uye CoinPayment kukuzivisa iwe kuti kuchinjirwa kwakaitwa nemazvo.
Chero bedzi Auto Auto's technical rutsigiro Gold haina kusimbisa kutengeserana, iwe hausi kuona huwandu hwako pane yako MT4 app.
Nhanho 13 / Pansaka / ATG-System
Batanidza ATG Sisitimu uye Pansaka
Batanidza kune ATG System
Kuti ubatanidze ku https://atgbot.co, shandisa iyo email nepassword sepairi Pantheratrade.
Mirira maminetsi akati wandei kuti rezinesi rako riongororwe nehurongwa. Maitiro aya anoshanda pakutenga rezinesi rako rekutanga pamwe nekuvandudza marezinesi ako anotevera. Cala inokutendera kuti ubatanidze rezinesi nyowani neakaundi yako yekutengesa.
uchadaro gamuchira email kubva atgbot.co (tarisawo spam yako).
Dzora iyo Voucher Code uye Voucher ID iripo mune iyo email.
Enda kune iyo ATG System webhusaiti uchishandisa ako makodhi Pantheratrade uye shandisa rezinesi rako: https://atgbot.co/user/ea/activate
Kopa unama zvinhu muminda yakakumbirwa.
Ratidza zvakanaka: Ndine Trade Account
Sarudza yako Nhoroondo Gold
Wobva wasimbisa iyi fomu.
⚠️ Ita shuwa kuti rezinesi rako "Rakabatanidzwa". Dzvanya pa "Refresh" bhatani kana zvichidikanwa kusvika zvadai. Edza maawa mashoma gare gare kana network yazara, zvikasadaro vhura a ATG System tekinoroji yekutsigira tikiti kuti ivo vamise yako ATG 5 robhoti.
Nhanho 14 / MetaTrader 4
Maitiro ekuteedzera ako aunowana pane iyo app MetaTrader 4 ?
MT4 ndeyemahara mobile application inokutendera iwe kuti uteedzere shanduko yemuhoro wako. Kunyangwe iwe uri pa Android kana IOS, unozviwana zviri nyore muZvitoro. Tarisa zvakanaka logo, unoda shanduro 4 yeMetaTrader.
Kana yangoiswa, isu tichaigadzirisa kune yako yekutengesa account. Kuti uite izvi, unofanirwa kunge wakagamuchira email kubva PantheraTrade ine 4 data rakakosha.
Master Password: Rezinesi rako
Investor Password (verenga chete): XXXXXX
PaMT4 app, tinya paSettings (pazasi kurudyi icon)> New account> Pinda neakaundi iripo.
Mubhokisi rekutsvaga (pamusoro), nyora: LegoMarketLCC2-LIVE
Username: Login (nhamba). Unogonawo kuzviwana pane peji remba re Pantheratrade (MT4 account).
Password: Investor Password (verenga chete). Kana wairasa, edza password yawakashandisa Pantheratrade.
Nhanho 15 / PantheraTrade
Maitiro ekubvisa mari yaunowana uye / kana yako capital chero nguva ?
Iwe unogona chete kubvisa mu crypto yakataurwa munhanho 2. Kana iwe wakaratidza chero USDT mu Crypto Kero, iwe uchagamuchira USDT. Ndokumbira utarise kuti kubvisa mari inosvika madhora makumi mashanu uye inodarika zviuru zviviri zvemadhora pazuva kumaakaundi ari pasi pemadhora zviuru zana. Kupfuura $ 50 yakaiswa (uye isina kuwana), unogona kubvisa 2000% yemari pazuva. Verenga 100.000 kusvika 100.000 $ mari yekutengeserana (zvisinei nemari yaunoda), zvichienderana nemari yakasarudzwa.
Ita kubvisa kubva PantheraTrade
Kuti ubvise mari, dzokera kunzvimbo PantheraTradetora Transaction> Kubvisa.
Sarudza mari yawakanyora mumunda wekero ye crypto kana uchinyoresa (USDT / LTC kana zvimwe), wobva wasimbisa.
Mufananidzo 1 - Zadza iyo yakakumbirwa ruzivo:
Source: Sarudza yako MT4 account kana yako rebates account. Iwe unogona zvakare kupora kubva kune yako yemukati Wallet (kuwana makomisheni kune avo vanotsigira).
Mari yeUS $: huwandu hwaunoda kubvisa mumadhora
Bvuma maconditions then Validate. Iwe unozoendeswa kune peji nyowani uye iwe panguva imwechete uchagamuchira email inosanganisira iyo OTP kodhi
Mufananidzo 2 - Tarisa uye bvuma kubviswa:
Pazasi pepeji ino, isa zvakare password yako PantheraTrade kana 2FA pasina kukanganwa ikozvino kuwedzera kodhi (Email OTP). Kana usati waigamuchira, inogona kubva kune yako email (hotmail, yahoo...). Kusaina neGmail harisi dambudziko. Kana zvichidikanwa, vhura tikiti uye uvakumbire kuti vachinje kero yako yazvino kuita kero yegmail.
Wobva wasimbisa kutengeserana.
Iwe uchafanirwa kumirira avhareji yemaawa makumi maviri nemana (kusingasanganisire kupera kwevhiki) kuti mari yekubvisa iiswe pane yako Exchange. Izvi zvinoenderana nemusiyano wenguva pakati peIndonesia nenyika yaunogara.
Nzira yekubata nayo technical support Autotrade Gold ?
Kuti ubate mumwe wevanhu makumi manomwe kumashure kwehunyanzvi rutsigiro rwe Pantheratrade, enda sezvinotevera: gara uchishandura shoko rako kuChirungu kana Indonesian (google translate ishamwari yako), iva akananga uye nemazvo, ipa humbowo hwekutengeserana (txid), iva netsitsi uye neruremekedzo. Bata rutsigiro kana paine dambudziko, kwete kubvunza mibvunzo. Vatsigiri, masocial network uye maforamu vane chinangwa ichi. Usatumira mameseji akawanda, hazvina maturo uye hazvibvumiri kuti matambudziko agadziriswe nekukurumidza, pane kudaro.
Vhura tikiti rekutsigira PantheraTrade
Musoro: 4 kana 5 mazwi ekutsanangura dambudziko rako
Sarudza Dhipatimendi: Account Support / Finance / Network
Sarudza Chikamu: Kusarudzwa kunoenderana nemunda uri pamusoro.
Mharidzo: Tsanangura dambudziko rako neChirungu kana Indonesian
Mufananidzo Link: Inokubvumira kuti uwedzere mufananidzo unotsanangura
Tumira meseji yako.
Mhinduro inozotumirwa kwauri mukati memaawa makumi maviri nemana (kunze kwekupera kwevhiki). Shivirira.
Unoda here anotsigira irobhoti reATG kubva PantheraTrade ?
Kana iwewo uchida kutumira shamwari uye uchivapa purofiti yepamwedzi inosvika gumi neshanu muzana, iwe unozofanirwa kuvapa yako yekutumira link iri pane peji. Kudyidzana> Dashboard
Iyo URL yekutumira kune ako mareferenzi ichaita seiyi: https: //pantheratraderarama / rejista /? r = IB ...
Basa re godfather vechokwadi ndeyekutungamira nekupa zano mumwe nemumwe wevacheche vana vake venguva yemberi, kubva kunyoreswa kusvika mukudzoserwa kwemihoro, kubva kuchinjisa kubhangi kuenda ku cryptocurrency, kutsanangura njodzi, kutora nguva pane rutsigiro rwehunyanzvi ... iva mumakurukota uye zvakanaka.
Makomisheni ekutsigira Autotrade Gold
Mazano ekupinda evashandisi vekare ve Pantheratrade
Kune vanoisa mari vakanyoresa pa Pantheratrade pamberi paKurume 18, 2022 uye ndiani anoda kubatana neshanduro itsva ye Pantheratrade.
Enda kupeji: https://live.pantheratrade.tech
Isa iyo email kero yeakaundi yako yekare PantheraTrade wobva wadzvanya pabhatani rekusimbisa.
Iwe unogashira neemail zita rako rekushandisa uye password yako yenguva pfupi iyo ichafanira kubatanidzwa pane ino peji: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
⚠️ Kana usina kugamuchira iyi email, tevera matanho aya:
Enda kupeji: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
Dzvanya pakakanganwa password
Nyora Username yako
Zita rekushandisa rakakanganwa uye password paPansaka
Kune vanhu vakanyoresa pa AutoTrade Gold pamberi paGunyana 1, 2021, unogona kunge usati wagamuchira yako Pansaka yekupinda ruzivo neemail. Heino mhinduro yekuvagamuchira:
Kubatanidza kune backoffice: https://pansaka.co.id/panel/login.php
Dzvanya pane iyi link. Forgot password?
Iwe uchasvika pane rimwe peji.
Dzvanya pane iyi link. Wakanganwa User ID?, wobva waisa yako email kero.
Iwe uchagamuchira yekutanga email neako ekupinda ID. Uku kutevedzana kwenhamba.
Dzokera kuPansaka rekupinda peji: https://pansaka.co.id/panel/login.php, wobva wadzvanya zvakare pane iyi link: Wakanganwa password yako? nekuratidza chinongedzo chako chekubatanidza (nhamba).
Iwe unozogona kuisa rako rekushandisa uye password nyowani kuti ubatanidze kuPansaka.
Tarisa paMukuru weAutotrade, VaDinar Wahyu Saptian Dyfrig
Dinar Wahyu Kenzo munhu ane mukurumbira muruzhinji muIndonesia. Mudyaridzi anozivikanwa, akave nebasa reIT uye hunyanzvi hunyanzvi chikamu akamiririra sangano reARTI. (Indonesian Trading Robot Association) kuongorora zvivakwa zvekutengesa zvisiri pamutemo muIndonesia nesangano re APLI rinotarisira kushambadzira kwenetiweki kubva 1984. Murume ane moyo muhombe, nekuda kwemhindu yekambani, mapasuru echikafu anodarika zviuru gumi akagoverwa kuvaIndonesia vaishaya panguva yeCovid. Iye zvakare maneja wekambani RBG yakaganhurwa muEngland, pakati peiyo Forex, uye anotsigira timu yenhabvu yeIndonesia, yakaenzana neligi 10 muFrance.
Dinar Wahyu Saptian Dyfrig (pakati) CEO Autotrade / Pansaka naBambang Soesatyo, mutauriri weparamende yeIndonesia.
A godfather, godson
Imwe neimwe kunyoreswa kunoitwa kubva kuendesa chinongedzo!
Uye nditende, hazvikuvadze zvakare!
Hazvisi nyore kutanga iyi mhando yekushanya kana iwe usina yapfuura kutengeserana kana cryptocurrency ruzivo. Ndosaka ndichizvibvumira kukuperekedza, kuti ndikubatsire kuseta maakaundi ako pakati pako broker (broker) uye yako kutengesa robot, pindura mibvunzo yakakodzera uye ipa rubatsiro rwehunyanzvi. Kana iwe usingakwanise kuwana affiliate link pane mamwe marobhoti, imhaka yekuti ini handidi kuzvitaura: pamwe ndiri kuzviongorora, kana kuti ndinonyumwira. Pamusoro pezvo, iwe unofanirwa kukwanisa kubata rutsigiro rwehunyanzvi uye kuperekedza zvaunotumira nenzira kwayo, saka ini handitore njodzi yekukupa ekutumira zvinongedzo pasina kuzvidzora.
Broker ASIC yakanyoreswa
🥇 Mari min. ± $ 250
capital min. ± €50
Capital min. $ 10
Uri kurasikirwa nechero ruzivo?
Usazeze kundibata pa 💬 Teregiramu kuti ndikwanise kukuyambira uye ndikupe rubatsiro rwangu.
Chenjerera kubiridzira kwe Forex pawebhu
Tsvaga iyo yakasarudzika makambani asingabvumirwe uye nzvimbo dzakapihwa ne AMF. Hapana marobhoti edu kana brokerhazvina kubatanidzwa.
Kuita kwakapfuura hakuna vimbiso yekuita kwemberi.
Iko hakuna kuita kwepamusoro pasina njodzi huru. Pamusika wemasheya, zvakapfuura kuita hazvireve kuti zvinodzokorora.
Iko hakuna zano rekudyara pane ino saiti
Kutengeserana kunofumura njodzi dzekurasikirwa kwakaenzana nemadhipoziti uye inokodzera chete vatengi vane ruzivo vane nzira dzemari dzekutakura njodzi iyi. Zvapfuura hazvisi kuratidza zveramangwana. Mushanyi ndiye ane mhosva yekushandiswa kwakaitwa ruzivo rwakatorwa uye anotora njodzi dzese dzine chekuita nekushandiswa uku. Kunyanya, zviri kune mushanyi kutora matanho ose anodiwa kuchengetedza kuvimbika kweguta rake guru. Robots-trading.fr, cryptonithe.com kana mon-conseiller-crypto.fr uye manejimendi ayo aisazopihwa mhosva yekukanganisa kwese kunogona kuitika.
Verenga yedu Zviga zvebvumirano uye yedu Transparency charter.